Warshadii Kalluunka ee Laasqoray ayaa la xidhay ka dib kalluunkii oo Gabaabsi galay | maakhir.com
Laasqoray:- Sida ay sheegeen Maamulka warshada Kalluunka ee Laasqoray waxa la xidhay warshadaasi ka dib markii uu gabaabsi galay Kalluunkii, Maamulka ayaa sheegay inay sababtaasi awgeed ay u xidheen warshadaasi,iyaga oo sheegay inay Fasaxeen Shaqaalihii ka shaqayn jiray warshadaasi.
Cali Fara Dheere oo ka mid ah hawlwadeenada warshada Laasqoray ayaa warbaahinta u sheegay inay xidheen warshadaasi isla markaan la furidoono xiliga ugu horaysa ee la helo Kalluun, Cali Fardheere waxa uu sheegay inay mudo wadeen uruurinta Kaydi ah Kalluun kaasi oo hadhaw dib loo farsamayn lahaa Balse xitaa kii kaydka ahaa uu gabaabsi galay.
“Warshadii waa xidhantahay Shaqaalihii badi waa Fasaxnaya marka laga reebo Ilaalada gaarka ah ee Warshada,waayo mudo ayaanu ka dhursugaynay Kalluunka balse waxa uu noqday mid gabaabsi galay”Saas waxa yiri Cali Faradheere.
Maamulkaasi warshada Laasqoray waxay kaloo sheegeen inaanay sanadkaba warshadu soo saarin Kalluunkii badnaan ee lagu yaqaanay taasi oo ay ku til maameen inay ka danbaysay Kalluunkii oo yaraaday.
Kaluun yaraantaasi ayay waxay ku eedeeyeen inay log wayn ku leeyihiin Doonyo Carbeed oo ka jilaabta xeebaha Deegaanka Laasqoray kuwaasi oo sharci daro Kalluunka uga jilaaba xeebahaasi iyaga oo hadhawna Dalka dibadiisa u iib geeya, in ta badan Doonyahaasi waxa wakiil ka ah dad deegaanka Sanaag u dhashay kuwaasi oo aan Garanayn dhibta ay leedahay Khayraadka Dalkiisa ee uu Gacmihiisa ku dhoofinayo.
Hadaba Shabakada Maakhir.com ayaa uguur kashay inay wax wayn ka ogaadaan xaalada ka jira xeebaha Deegaanka Laasqoray,anaga oo dad badan ka dhegaysany warbixno waxana noo soo baxaday inay Xeebta Laasqoray haatan ku sugan yihiin 32- Doonyood oo ah kuwa doonaya inay Ka jilaabtaan khayraadka xeebahaasi ku jira kuwaasi oo Masuul ka yihiin Shakhsiyaad yar oo deegaankaasi u dhashay.
Waxa jira Dadaal dheer oo bilaabeen waxgaradka deegaanku kuwaaso oo doonaya inay wax ka qabtaan dhibaatadaasi ay wadaan kuwa aan aqoonta saasi u fog lahayn, waxay sheegeen waxgaradku inay gacan bir ah ku qabanayaan kuwa doonaya inay dabar jaraan khayraadka Bada.
Warshada Kalluunka soo saarta ee Laasqoray Tuna Fish ayaa waxa horaantii sanadkii aan soo dhaafnay la wareegay Ganacsato cusub kuwaasi oo kala wareegay kuwii horay warshada u maamuli jiray, kadib markii uu soo kala dhex galay Khilaaf daba dheeraaday oo mudo soo jeetamayay ayaa lagu taliyay inay Gacantooda ka wareejiyaan warshada.
Maamulka cusub ee hataan Gacanta ku haya warshada ayaa la sheegayaa inaanay wax saasi oo la taaban karo ku soo kordhin warshada oo ay wali yaaliin qalabkii lagu hirgaliyay markii la taagay warshadaasi horaantii sanadkii 2001, iyaga oo markii ay warshada la wareegayeen sheegay inay wax wayn ka bedelayaan qalabka iyo Shaqada warshada labada.
« Madaxwayney Yuusuf ayaa maanta magcaabay Safiiro cusub
Yeman oo ka Degtay Tahriibta faraha badan ee ku soo jeeda dalkeeda »